Nhau - Maitiro ekuita nekumanikidza polarization ye reverse osmosis membrane
Maitiro ekuita nekumanikidza polarization ye reverse osmosis membrane
Reverse osmosis system chinhu chakakosha chikamu chidiki uye chepakati-saizi otomatiki Ultra yakachena mvura yekurapa michina, asi kune zvakare njodzi yakavanzwa mune yekumashure osmosis system, ndiko kuti, pamusoro peiyo reverse osmosis membrane iri nyore kuumba kusangana kweparaga ne solute kana zvimwe zvinhu zvakachengetedzwa, zvinozokanganisa kunaka kwemvura yekushandisa pakurapa mvura.
1. Kuwedzera velocity nzira
Chekutanga pane zvese, tinogona kutora matanho anowanzo shandiswa muindasitiri yemakemikari kuwedzera kukanganiswa. Ndokunge, edza kuwedzera mutsetse velocity yemvura inoyerera kuburikidza neiyo membrane pamusoro. Iyo adsorption nguva ye solute inogona kudzikiswa nekudzikisa yekugara nguva yemvura uye nekuwedzera iyo velocity yemvura mune zvidiki nepakati-saizi otomatiki Ultra yakachena mvura yekurapa michina.
2. Kurongedza nzira
Semuenzaniso, 29 ~ 100um mabhora anoiswa mune yakarapwa mvura uye inoyerera nepashure osmosis system pamwechete kudzikamisa huremu hwenzvimbo yemuganho wedanho uye kuwedzera hutachiona velocity. Izvo zvinhu zvebhora zvinogona kugadzirwa negirazi kana methyl methacrylate. Uye zvakare, kune tubular reverse osmosis system, micro sponge bhora inogona zvakare kuzadzwa mune yekudya mvura. Nekudaro, kune iyo ndiro uye furemu mhando membrane mamodule, iyo nzira yekuwedzera yekuzadza haina kukodzera, kunyanya nekuda kwenjodzi yekuvhara iyo kuyerera chiteshi.
3. Pulse nzira
Pulse jenareta inowedzerwa mukugadzirwa kwemidziyo yekurapa mvura. Iko kukura uye kuwanda kwekutenderera kwakasiyana. Kazhinji, iyo yakakura kukura kana kuwanda, iko kuyerera kwekuwedzera. Agitator anoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yese yekuyedza. Chiitiko chinoratidza kuti iyo yakawanda yekuchinjisa coefficient ine hukama hwakaenzana nenhamba yekumukira kweaititita.
4. Kuiswa kwekusimudzira turbulence
Vanokurudzira Turbulence akasiyana ezvipingaidzo anogona kusimudzira kuyerera maitiro. Semuenzaniso, kune tubular zvinoriumba, zvinonamira zvinovhiringidza zvakaiswa mukati. Kune iyo ndiro kana roll mhando membrane module, iyo mesh uye zvimwe zvinhu zvinogona kuve mumutsetse kusimudzira kusagadzikana. Mhedzisiro yeiyo turbulence inosimudzira yakanaka kwazvo.
5. Wedzera chakapararira sikero inhibitor
Kuitira kudzivirira iyo reverse osmosis membrane kubva pakuyera mumidziyo yekurapa mvura, sulfuric acid kana hydrochloric acid inowedzerwa kugadzirisa iyo pH kukosha. Nekudaro, nekuda kwekuora uye kuvuza kweiyo acid system, anoshanda anonetsekana, saka iyo inopararira chiyero inhibitor inowanzo kuwedzerwa kuchengetedza zvakajairika mashandiro emvura yekurapa system.
Post nguva: Aug-31-2020